Adiga iyo shaqo dhex-dhexaadiyahaaga ayaa qorshaynaya nooca hawlaha adiga kugu haboon si aad sida ugu dhakhso badan ee suurtagal ah u baratid iswiidhishka una heshid shaqo. Waa kuwan dhowr tusaale oo ka mid ah hawlahan:
Marka aad ka qayb-qaadanayso barnaamijka meelaynta waxaaad magdhawga maalmeedka ka heli kartaa Qasnada Caymiska. Marka aanu kugu qorno barnaamijkan ayaad magdhawka ka codsanaysaa Qasnada Caymiska. Si loo helo magdhawka waxaa muhiim ah in adigu aad raacdo qorshaha aad si wada-jir ah noola samaysay. Tani waxay tahay in lagaaga baahanyahay ka qayb qaadashada hawlaha aynu ku heshiinay.
Magdhawga maalmeed ka codso Qasnada Caymiska
Haddii aad hesho shaqo wakhti buuxa ah xilliga wakhtiga aad ka qayb qaadanayso barnaamijka meelaynta markaasi waa lagaa saarayaa barnaamijkan.